Omena anao ny fanekena, ny fahefana no raisinao | Martech Zone
Tamin'ity herinandro ity dia nanana resadresaka nahagaga tamin'ny mpiara-miasa amiko amin'ny sehatry ny varotra aho. Kivy ilay olona. Izy ireo dia manam-pahaizana manokana tamin'ny sehatry ny indostria nahitana valiny nahagaga nandritra ny taona maro. Na izany aza, matetika izy ireo dia tsy noraharahaina rehefa tonga amin'ny fotoana hitenenana, torohevitra na fiheverana avy amin'ny mpitondra.
Amin'ny 40 taona, ny fahefana tonga tara kokoa noho ny maro amin'ireo mpitarika ekena ao anatin'ny tontolon'ny marketing. Tsotra ny antony - mpiasa miasa mafy sy mpamokatra aho izay nahafahan'ny mpitarika ny orinasa nanampy ahy hanana fahefana. Namolavola tatitra momba ny indostria aho izay nahatonga azy io ho boky sy fampisehoana fototra izay misy ny anarany ao. Nanomboka orinasa tsy nantsoina hoe mpanorina ahy aho. Nijery aho fa ny olona notateriko dia nasandratra sy nandoa vola be, raha niasa ho azy ireo kosa aho. Betsaka amin'izy ireo no manan-karena.
Tsy manome tsiny azy ireo aho. Mankasitraka ny zavatra nianarako nijery azy ireo aho. Raha ny marina dia mpinamana be amin'ny maro amin'izy ireo aho ankehitriny. Saingy nandritra ny asako dia niandry aho ekena ho fahefana. Ny lesona farany azoko farany rehefa nijery azy ireo aho dia lasa manampahefana satria tsy niandry ny hahafantarana azy ireo velively. Noraisiny ny fahefany.
Aza adika vilana fa raisin'izy ireo izany avy amiko. Tsia, nalain'izy ireo tamin'ny indostria izany. Ny fanekena dia tsy tonga aloha, avy eo taorian'io. Tsy azo sakanana izy ireo mba hisongadina ny sain'izy ireo. Rehefa nisy hetsika horesahina dia nilalao baseball mafy izy ireo mba hahazoany fotoana faran'izay tsara, ary nataon'izy ireo antoka fa hampiroborobo… na dia mampiroborobo ny fidiran'izy ireo aza. Rehefa nisy ny dinika tontonana dia nofehezin'izy ireo izany. Rehefa nahita ny loka azony izy ireo dia natolotr'izy ireo. Rehefa nila fijoroana vavolombelona izy ireo dia nangataka izany.
Raisina ny fahefana fa tsy omena. Fanomezana ihany no omena. Raha misy zavatra ianarana amin'ny fampielezan-kevitra Trump sy Sanders dia ity. Tsy nisy na iza na iza tao amin'ny haino aman-jery mahazatra na ny sehatra politika na iza na iza nitady ireo kandidà roa ireo ho eo am-perinasa. Tsy niraharaha ireo kandidà - nandray ny fahefana izy ireo. Ary nifandimby, neken'ny besinimaro izy ireo noho izany.
Ny mpiara-miasa amiko iray vao notsikera ampahibemaso Gary Vaynerchuk ampahibemaso. Tsy nisy fananganana io, tsy tiany fotsiny ny fombany sy ny hafatr'i Gary. Hatramin'ny nesorany ny toerany, saingy hevitra iray monja no mba nomeko: Tsy miraharaha izay eritreretinao i Gary Vaynerchuk. Tsy miandry ny hahafantarana azy ity mpitarika indostrialy ity i Gary, nalain'i Gary izany. Ary ny fanitarana ny fahefany sy ny orinasany dia porofo fa mendrika ny fahefana.
Ity misy torohevitra vitsivitsy tiako homena ny olona manana talenta sy sorena:
Miezaha ho tia tena - Tsy te hisintona amin'ny hafa aho ary tsy hiala amin'ny fanampiana ny hafa. Tokony hanana rakitsoratra mahavariana ianao hananganana ny fahefanao. Saingy mila manokana fotoana amin'ny asanao ianao ary manaova fotoana hiasana ho anao. Hevero ho kaonty fisotroan-dronono ny fahefanao amin'ny ho avy. Tsy afaka misotro ronono ianao raha tsy mahafoy tena anio. Toy izany koa amin'ny fahefanao. Tsy hanangana fahefana ianao raha tsy mampiasa fotoana sy ezaka anio. Raha miasa 100% amin'ny mpampiasa anao na amin'ny mpanjifanao ianao dia tsy manambola na inona na inona ho anao. Aza manantena fankasitrahana. Mandehana miasa amin'ny lahateninao manaraka… na dia mbola tsy misy mpihaino anao aza. Mandehana manoratra boky. Mandehana manomboka podcast. Mandehana an-tsitrapo ho eo amin'ny tontonana. Mandehana amina hetsika iray mba hiresahanao. Ankehitriny.
Mahereza - Sarotra ny serasera, manakiana izany. Mampiasako fanambarana manohana ny zavatra niainako. Fantatro izay ataoko ary milaza izany aho. Matetika aho mibaiko fivoriana (tsy hoe satria halako fotsiny) satria tsy mampiasa teny toy izany aho angamba, Heveriko fa, afaka nataontsika, sns. Tsy mitetika teny aho, tsy miala tsiny, ary tsy mihemotra rehefa misy fanamby. Raha misy manohitra ahy dia tsotra ny valinteniko. Andao hizaha toetra azy. Tsy hoe satria fantatro fa fantatro ny zava-drehetra, satria matoky aho amin'ny zavatra niainako.
Aoka ho marin-toetra - Tsy ampoiziko amin'izay tsy fantatro. Raha misy fanamby na anontaniako ny hevitro amin'ny zavatra tsy azoko antoka dia ajanoko ny resaka mandra-pikarohako. Ianao dia nilaza tamim-pahefana mahery kokoa hoe: "Avelao aho hanao fikarohana momba an'io, tsy haiko." na “Misy mpiara-miasa amiko izay manampahaizana manokana amin'izany, avelao aho hanaraka azy.” toy izay manandrana mamingavinga ny lalanao amin'ny alàlan'ny valiny iray izay ezahanao ho hendry. Tsy manao vazivazy olona ianao rehefa manao izany. Raha diso ny anao, dia toy izany koa… ekenao izany ary mandrosoa.
Samihafa - Ny olon-drehetra is samy hafa. Ny fiezahana hifanaraka dia hahatonga anao hifanaraka tanteraka. Hiafina ianao amin'ny olona hafa rehetra izay tsy manana fahefana sy fanekena manodidina anao. Inona no tsy itovizanao? Ny fisehoanao ivelany ve? Vazivazy? Ny zavatra niainanao? Na inona izany na inona dia raiso izany rehefa manolotra ny tenanao amin'ny hafa ianao. Tsy lava aho, matavy, volo volo… kanefa mihaino ahy ny olona.
Mitandrema - Manodidina anao ny fotoana rehetra. Tsy maintsy mailo hatrany izy ireo. Mamaly saika ny fangatahana rehetra nataoko mivantana tamiko aho mba ho eo amin'ny podcast na hanome teny nalaina ho an'ny indostrian'ny indostria. Mitady fotoana mety aho serivisy fangatahana fanaovan-gazety. Mandefa hevitra manahirana hevitra tsy mifanaraka amin'ny hevitrao aho na manome loko fanampiny rehefa tsy feno ny lahatsoratra.
Aza matahotra - Ny hoe manampahefana dia tsy midika hoe tian'ny rehetra ianao. Raha ny marina, amin'ny fametrahana ny tenanao eo alohan'ny hafa dia ho lasibatry ny tsy mitovy hevitra tanteraka ianao. Raha nihaino ny olona rehetra izay tsy nifanaraka tamiko tamin'ny fiainako manontolo aho dia tsy ho lasa taiza na taiza. Raha niezaka ny ho tian'ny rehetra aho, dia hiditra ao amin'ny paroasy. Mizara ny tantaran'ny reniko manokana aho matetika. Rehefa nanomboka ny orinasako aho dia ny fanamarihany voalohany hoe: “O Doug, ahoana no hahazoanao fiantohana ara-pahasalamana?” Indraindray aza ianao tsy maintsy manaporofo fa diso ireo tianao.
Farany, ny lakilen'ny fahefana dia ianao no kodiaran'ny hoavinao fa tsy olon-kafa. Tena mendrika ny fahefana inoanao fa anananao ianao… saingy tsy afaka mipetrapetraka ianao miandry ny hafa hahafantatra anao mandra-pitondranao azy. Raha vao manambola ianao dia ho fantatra. Ary rehefa fantatry ny hafa ianao - na dia voatsikera aza, dia mandeha.
Nanatrika famelabelaran-kevitra avy amin'ny mahagaga aho Ellen Dunnigan (ny mafy orina, Fanamafisam-peo amin'ny asa aman-draharaha, nandrakitra ny horonan-tsary tamin'ity lahatsoratra ity) ary nanome toro-hevitra maromaro momba ny fahefana manorina izy. Mitaky ny hanananao fanahy iniana sy iniana atao amin'ny fomba hitondranao azy rehetra fotoana hibaikoana fahefana. Manoro hevitra anao aho hanaraka ny tenan'i Ellen amin'ny media sosialy sy Youtube, hianatra taonina ianao! Manakarama azy mafy orina dia hiova ianao.
Tags: fanairanafahefanasahyfahefana manorinafahasamihafanaDonald trumpgary vaynerchukgary veemarinapublicMitenytrompetrany